Ikhululekile kwaye intle, iHotele ye-Aibonito - 201 - I-Airbnb
Ikhululekile kwaye intle, iHotele ye-Aibonito - 201
Ifumaneka kumbindi weentaba zesiqithi, i-Aibonito 201 inegumbi elinebhedi ekhululekile kaKumkanikazi, iTV enenkqubo ye-ROKU kunye negumbi lokuhlambela labucala. Le ndlu inomthamo oqhelekileyo wabantu aba-2 kwaye ibhedi ephathekayo inokongezwa ngeendleko ezongezelelweyo ze-US $ 15 / ukuhlala.
Ukongeza, sinokunikezela ngeenkonzo zolungelelwaniso ezongezelelweyo zothutho, isikhokelo sotyelelo kwiindawo zabakhenkethi kunye nezinye iinkonzo ezinje ngokuhlamba impahla, umnxeba, ikhompyuter, okanye ezinye.
Igumbi le-Queen labantu aba-2
Igumbi ngalinye likumgangatho wesibini, elinokufikelelwa kuphela ngezinyuko.
Le ndlu ibandakanya itafile esecaleni kwebhedi enezibane, ikhabhathi, isitulo sengalo, iTV enenkqubo ye-ROKU, itafile, kunye nentsimbi, i-intanethi. Ine queen bed for 2 people. Singanikezela ngebhedi ephathwayo nge-15 yeedola ezongezelelweyo ngokuhlala.
Ngenxa yendawo ekuyo, iHotele iAibonito ikunika ezona ndawo zibalulekileyo, iindawo zokutyela eAibonito. Ihotele ye-Aibonito ifumaneka e-Aibonito kwaye inikezela nge-Wi-Fi yamahhala kunye nemibono yeentaba. Le ndawo yokuhlala ine-air-conditioning ikunika ithuba lokuphila ngamava angalibalekiyo.
Sinikezela ngengqwalasela yobuqu kubathengi bethu ngemiyalezo okanye iminxeba ngenombolo yethu yefowuni, ekwabelwana ngayo kwangoko emva kokuba ugcino lwenziwe.
Ukongeza, sinokunikezela ngeenkonzo zolungelelwaniso ezongezelelweyo zothutho, isikhokelo sokundwendwela iindawo ezinomtsalane kunye nezinye iinkonzo ezinje ngokuhlamba impahla (ukucoca nokuthatha), umnxeba, ikhompyuter, okanye ezinye.